भारतमा रहेका बेला देउवाविरुद्ध कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको गोप्य भेला – Etajakhabar
भारतमा रहेका बेला देउवाविरुद्ध कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको गोप्य भेला
काठमाडौं, ११ भदौ ।
सभापतिले विधि, प्रक्रिया र पद्धति तोडेको आरोप –
सल्लाह नै नगरी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता विमलेन्द्र निधिलाई कार्यबाहक सभापति बनाएपछि नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट भएको छ ।
शनिबार महामन्त्री डा. शशांक कोइरालानिवास महाराजगन्जमा बसेको पौडेल पक्षको भेलाले विधि, प्रक्रिया र पद्धति तोड्दै एक्कासि सभापति देउवाले निधिलाई कार्यवाहक सभापति तोकेको निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘पार्टीमा परामर्श नै नगरी हतारमा कार्यवाहक सभापति तोकिएपछि बैठकमा अधिकांश नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ,’ भेलामा सहभागी एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कार्यवाहक बनाउँदा विधि, परम्परा केहीलाई पनि ध्यान दिइएन । अकस्मात् कार्यवाहक बनाइयो भनेर साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।’ भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने दिन ७ भदौमा देउवाले केन्द्रीय समितिमा आठौँ वरीयताका निधिलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा दिएका थिए ।
फेरि हार्ने डर : साउन मसान्तभित्रै प्रदेश–२ मा उम्मेदवारको टुंगो लगाउने तयारी गरे पनि १० भदौ बित्दासमेत कांग्रेसले उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन । पहिलो र दोस्रो चरणमा जस्तै तेस्रो चरणमा पनि ढिलो गरी उम्मेदवार चयन हुँदा फेरि पनि हार्ने चिन्ता पौडेल पक्षको छ । ‘प्रदेश–२ मा उम्मेदवार साउन मसान्तभित्रै टुंग्याउने भन्ने थियो ।
तर, अहिलेसम्म हुन सकेको छैन,’ नेता डा. रामशरण महतले भने, ‘उम्मेदवार चयनमा ढिलाइ गर्दा फेरि पनि हारिन्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ । न उतातिर निर्वाचनको तयारी भएको छ न यता उम्मेदवारको टुंगो नै लागेको छ ।’
जिल्लाबाट उम्मेदवारको सिफारिस भएर नआउँदा समस्या देखिएको उनले बताए । भेलामा नेताहरूले महामन्त्री शशांकलाई छिटो उम्मेदवार टुंग्याउने पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । छलफलमा नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, डा. महतलगायत सहभागी थिए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र ११, २०७४ समय: ८:०९:००